Orlistat powder --- I-fat loss loss drug ifanele ukwazi !! | AASraw
/Blog/Orlistat/Umthombo wemvelo we-Orlistat powder ukulahleka kwesisindo-I-fat loss loss drug ifanele uyazi !!!
ezaposwa ngomhla 01 / 28 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Orlistat.
1.Yintoni i-orlistat? 2.Kubani sikhetha i-Orlistat yokuphila okunempilo?
3.Yiliphi igama le-Olistat? 4.Yintoni i powderat?
I-5.Iyi-powder i-orlistat esebenzayo? 6.Usebenza njani i powder powder?
I-7.Orlistat yePowder Mechanism of action 8.Ziziphi iingenelo ze-orlistat powder?
9.Ndiyisebenzise njani i-orlistat powder? I-10.Imilinganiselo yamaninzi ye powderat
11.Ngaphambi kokuba usebenzise i-orlistat powder 12.Wathi uthatha ipowder
13. Emva kokusebenzisa i-orlistat powder 14.Yintoni i-effect-side effect ye-orlistat powder
15.Orlistat VS Sibutramine Indawo ye-16.FA & Q
17.Isiqendu se-Orlistat kunye ne-Olistat powder 18.Bulela i-Olistat powder online
I-19.Ukuthenga njani ucoceko oluphezulu Olistat powder evela kwi-AAS
I-Orlistat ividiyo ekhoyo eluhlaza
|.Orlistat ezisisiseko Abalinganiswa:
Orlistat, Eyaziwa ngokuba yi-Xenical njengegama le-brand ye-orlistat ye-Orlistat ejwayelekile, esetyenziswayo unyango lokunyanya. Inemiphumo efanayo kunye nokulahleka kweoli sibutramine, i-clenbuterol, I-Orlistat inqanda umzimba wakho ukuba ungamkeli ioli kunokutya okutyayo. Ngokunciphisa inani lamanqatha anqambileyo, i-Orlistat inokukunceda ukuba ulahlekelwe isisindo ngokulula .. Ngenxa yokuncedisa i-Orlistat kunceda abantu banciphise ubunzima, kunokunceda ukukhusela iimeko zonyango ezinxulumene nobunzima obukhulu kunye nokukhuluphala. Ubuthakathaka bunxulumene kakhulu nohlobo lwe-2 yesifo sikashukela, isifo senhliziyo, uxinzelelo lwegazi oluphezulu kunye ne-apnea yokulala, enokubangela iingxaki ezingaphezulu zempilo. Ukulahlekelwa ubunzima obuninzi ngenye yeengcebiso eziqhelekileyo ezivela kumagqirha xa kuziwa ekuphuculeni impilo yonke kunye nokuphila ixesha elide.Kwimakethi, kukho iintlobo ezahlukeneyo ze-orlistat, ngokuqhelekileyo njengefomathi yefomathi, ifompole ifomu, ifomda yefowder, i-ect.
2.Kubani sikhetha i-Orlistat yokuphila okunempilo?
Namhlanje, ukugqithisa kukuba ngumngcipheko weengxaki, kwaye ukuba unobungakanani obunzima bokuba neengxaki zempilo ezifana nohlobo lwe-2 yesifo sikashukela, ukuphakanyiswa kwe-cholesterol, ukuphakanyiswa kwengcinezelo yegazi, isifo se-heart coronary, i-osteoarthritis, i-cancer ye-fatty-related and pain joint. ukulandelelana ukulahlekelwa ngamanqatha okanye ukugcina ubuncinane,sisoloko sisebenzisa okanye sithatha ixabiso lokulahlekelwa kweziyobisi .Abantu abaninzi banokuzama ukuzisebenzisa ngaphambi kokuba, kunye nefuthe elincinci.Ngako Ukwenza utshintsho oluthile kodwa oluthile kwizinto zokutya kunye nendlela yokuphila kunokukunceda ukuba unciphise umzimba kwaye unciphise umngcipheko wokuphuhliswa kwezi ngxaki zempilo. ukulahlekelwa kweoli,U-Olistat usebenza ngokuthintela i-enzyme (lipases) ekuphuleni amanqatha emathunjini nokuvumela ukuba idlule emzimbeni ongagqithwanga. Oku kukunciphisa inani leekhalori ezixutywe ngumzimba. Yiyo uhlobo lwe-sourc kwisityalo esingokwemvelo, luneempembelelo ezingaphantsi kwamanye, i-orlistat, kunye nokutya okunokutya, sinokuphila okunempilo. Kungenxa yoko abaninzi abantu bayayithanda kwaye uthenge i-Olistat.
3.Yiliphi igama le-Olistat?
Xenical kunye no-Alli ligama lomkhwa we-Orlistat. I-Xenical yenziwe yiRoche kwaye iqulethe isithako esisebenzayo se-Orlistat 120mg. U-Alli ligama le-brand ye-Orlistat 60mg kwaye liphezu kwamachiza e-counter. U-Alli unesiqingatha samandla omyalelo wonyango kuphela okanye i-Orlistat 120mg, i-Alli, ne-Xenical. Ngokuqinisekileyo akukho mmahluko phakathi kwabo, i-Orlistat iyafumaneka ngokubanzi ngexabiso elisezantsi.
4.Yintoni i powderat?
I-Orlistat powder ingumgubo ogqityiweyo we-orlistat, luhlobo lwepowder omhlophe, i-99% yobungcwele. Njengoko sonke siyazi, kungakhathaliseki ukuba lunjani uhlobo lweyeza, zinemiphumo emibi emzimbeni, ngelixa uninzi lweyeza elinciphisa ubunzima omkhulu kumonakalo womzimba womntu, okanye i-listlist njengemveliso yendalo yemvelo, xa kuthelekiswa neepilisi ezininzi zokutya kwiimarike, okanye i-orlistat ingabikho miphumo embi, umonakalo omncinci emzimbeni, ngoko-ke i-orlistat powder iyona khetho olufanelekileyo. Iinkcukacha ze-orlistat powder ngezantsi:
I-Formula ye-Molecular: C29H53NO5
I-Melt Point: 50 ° C.
Ukugcina: 2-8 ° C.
I-5.Iyi-powder i-orlistat esebenzayo?
I-Orlistat powder iye yafundiswa ngokubanzi kwiimvavanyo ezininzi zeeklinikhi. Kwimizuzu yesilingo yesilingo, ukulahleka kwesisindo somzimba kunye ne-Orlistat xa kuthelekiswa ne-placebo kunye nokutya, bekuyi-50 yepesenti ephakamileyo. Ngoko ukuba unokulahlekelwa yi-6 kg kwisidlo esiqhelekileyo, ungalahlekelwa yi-9 kg kunye ne-Orlistat. Ukongezelela, kwaboniswa ukuba abo bathatha i-Orlistat bagcina ukulahlekelwa kwesisindo ngaphezu kweqela le-placebo. Ukuze ufumane usebenze ngokugqithiseleyo ukusuka kwi-Orlistat, i-capsule enye kufuneka ithathwe ngesondlo ngasinye esisisiseko (ubuninzi be-360mg ngosuku), ngaphambi, ngexesha, okanye ukuya kwi-120mg (i-capsule) iyure emva kokutya. Ukuba uphoswa isidlo okanye isidlo asiququli nayiphi na inqatha, akudingeki ukuba uyithathe.
6.Usebenza njani i powder powder?
I-Orlistat powder ithatha indawo kwindawo yokugulisa (intlaba). Ukusebenza kwe-fatty orlistat kusebenza njani ngokuthintela i-enzyme (lipases) ekuphuleni amanqatha emathunjini nokuvumela ukuba idlule emzimbeni ongagqithwanga. Oku kuyanciphisa inani leekhalori ezifakwe ngumzimba. Kwi-dose ephakanyisiweyo ye-120 mg kathathu ngosuku, i-Orlistat iyanciphisa ukunyuswa kwamafutha ngamaphesenti e-30. Nangona i-Orlistat yindlela ephumelelayo yokulahlekelwa kweyeza, akusiyo isimangaliso sokulahlekelwa kwesisindo. ... I-Orlistat iyasebenza ekukhuseleni ukuxutywa kwamafutha kwisondlo sakho esiya kukuncedisa ukunciphisa i-calorie yokudla. Kucetyiswa ukunciphisa iikhalori zakho zokutya malunga ne-500 calories ngosuku.
7.Orlistat powder'Inkqubo yesenzo
I-Orlistat powder e sebenza ngayo ukuvimbela isisu kunye nepascreatic lipases, i-enzyme ephula i-triglycerides emathumbu. Xa umsebenzi we-lipase uvaliwe, i-triglycerides ukusuka ekudleni ayinakwi-hydrolyzed ibe yi-fatty acids free acids, kwaye endaweni yoko ayinakuguquka. Ukulandelela kuphela inani le-orlistat lithatyathwa ngokufanelekileyo; Isiphumo esiyinqobo yendawo ye-lipase inhibition ngaphakathi kwiphecana le-GI emva komthamo womlomo. Indlela ephambili yokuphelisa i-feces.
I-Orlistat powder eluhlaza yayisandul 'ukufunyanwa ukuba ivimbele i-domain ye-thioesterase ye-fatty acid synthase (FAS), i-enzyme ebandakanyekayo kwandalala yeeseli zomhlaza kodwa ezingekho iiseli eziqhelekileyo. Nangona kunjalo, iziphumo ezinobungozi ze-Orlistat, ezinjenge-inhibition zamanye ama-cell off-targets okanye ukungabikho kobuhlwempu, kunokusonakalisa isicelo salo njenge-arhente esebenzayo. Esinye isifundo sokuphanda senza i-chemical proteomics indlela yokukhangela iithagethi ezintsha zamaselta, kuquka nezithagethi [ezifunekayo]. I-Orlistat ibonisa kwakhona izinto ezinokwenzeka ze-mycobacteria kunye ne-Trypanosoma brucei parasite (Funda ngakumbi ukufunda).
8.Ziziphi iingenelo ze-orlistat powder?
I-Orlistat powder idla ngokusetyenziselwa ukwenza i-Orlistat ipilisi eluhlaza, i-orlistat capsule, ukwenza imveliso ekhethekileyo yokulahlekelwa kweoli. Iinzuzo ze-orlistat powder zivumela umntu ukuba alahlekelwe i-20% yesisindo somzimba ngexabiso lezicubu ze-adipose. Njengesixhobo sokulahlekelwa kwesisindo sokuvuthwa, i-Orlistat inenzuzo engenakuphulukiswa ngaphezu kwamanye amayeza okulahleka kwesisindo ngokwemigangatho yokufumana ubunzima ngokuphindaphindiweyo emva kokupheliswa konyango. ngenxa yendlela ephakamileyo yokuthatha isenzo xa kuthelekiswa nemishishini yemithi engavumelekanga, isebenza njengesilinganisi sokuthintela ukufumana ubunzima, kunye nemisebenzi enobungakanani kwaye iyanciphisa ubunzulu bezifo ezinjenge-hypotension, isifo sikashukela, i-atherosclerosis kunye ne-cholesterol.
Ngexesha leemvavanyo zonyango kwi-Orlistat i-powder powder loss loss weight, ngaphezu kwe-30,000 abantu abathathe inxaxheba kwisifundo. Ukususela ekuvunyelweni kwayo, ngaphezu kwe-13.5 abantu abaye bathatha i-Orlistat kwaye balahlekelwa ubunzima obunzima. I-Orlistat ibhaliswe njengemithi yokulahlekelwa isisindo kumazwe e-149 kwihlabathi. Iindleko ze-Orlistat powder ziquka:
• Ukunciphisa umzimba ubunzima ngaphezu kwe-20% ngeendleko zomzimba womzimba
• Unceda ufunde indlela yokubala iekhalori
• Kukunika umvakalelo wokuphila
• Iziphumo zayo ezilungileyo zinika ithemba kunye nolonwabo kubasebenzisi
• Inika iziphumo ezizinzileyo zexesha elide
9.Ndiyisebenzise njani i-orlistat powder?
Eli nyanga liza nemiyalelo yesigulane ngokusetyenziswa ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo. Landela ezi ngcebiso ngokuchanekileyo. Buza ugqirha wakho okanye ukhemisti ukuba unemibuzo.
I-Orlistat powder eluhlaza yinxalenye yenkqubo epheleleyo yokonyango equka ukutya, ukuzivocavoca, kunye nokulawula ubunzima. Ukutya kwakho kwemihla ngemihla, iiprotheyini kunye ne-carbohydrate kufuneka ihlulwe ngokulinganayo kuzo zonke ukutya kwakho kwansuku zonke. Landela ukutya kwakho, amayeza kunye nokuzilolonga ngokuqhelekileyo.
Isilinganiselo esinconywayo se-Orlistat powder eluhlaza ngenye ye-120mg capsule kathathu ngosuku kunye nesondlo ngasinye esisisiseko esineziqhamo (ngexesha okanye ukuya kwi-1 iyure emva kokutya).
Ukuba unqumla isidlo okanye uyidla isidlo esingenayo nayiphi na inqatha, weba i-orlistat yakho ye-powder dosage dosage yesidlo.
Umxholo wenqatha wokutya kwakho kwansuku zonke akufanele ube mkhulu kune-30% ye-caloric yakho yokudla. Umzekelo, ukuba uyadla i-1200 calories ngosuku, akukho ngaphezu kwe-360 yale khalori kufuneka ibe yindlela yeoli.
Funda ilebula yazo zonke izinto ozidlayo, uhlawule ingqalelo ekhethekileyo kwinani leenkonzo ezibhekiselwe kwisitya ngasinye. Ugqirha wakho, umcebisi wezondlo, okanye umtya wezondlo unokukunceda uhlakulele isicwangciso sokutya esinempilo.
Ugqirha wakho unokucetyisa ukuba uthathe i-vitamin nedamineral supplements ngelixa uthatha i-orlistat powder eluhlaza. La mayeza angenza kube nzima ukuba umzimba wakho uthathe amavithamini amanqamle, anjengevithamini A, D, E, kunye neK. Yilandela imiyalelo yesigqirha sakho malunga nohlobo lwe-vitamine okanye i-mineral supplement yokusetyenziswa.
Thatha i-vitamin yakho okanye uncedise ngexesha lokulala, okanye ubuncinci iiyure ze-2 ngaphambi okanye emva kokuba uthathe i-powder powder.
Gcina kwiqondo lokushisa elisekude kumanzi kunye nobushushu. Gcina ibhotile ivalwe ngokuqinile. Phonsa nayiphina i-powder engasetshenzisiweyo ye powder eluhlaza emva komhla wokuphela kwileyibhile yeyeza.
Qaphela umlinganiselo weyeza elisebenzisiweyo kwibhotile nganye entsha. I-Orlistat powder eluhlaza isilwanyana esingasetyenziswa kakubi njenge-loss-loss aid, kwaye kufuneka uqaphele ukuba kukho na umntu osebenzisa iyeza lakho ngendlela engafanelekanga okanye engenayo imithi.
I-10.Imilinganiselo yamaninzi ye powderat
I-Orlistat powder eluhlaza yayisetyenziswe ngomlomo njenge-capsule kunye ne-capsule engabonakaliyo. Isilinganiselo esinconywayo se-Orlistat yenye ye-120-mg capsule kathathu ngosuku. Thatha i-orlistat ngexesha lokutya okanye ukuya kwi-1 iyure emva kokutya. Ukuba ukutya kungaphumeleli okanye ungenawo amanqatha, ungasenqa idosi yakho. Landela izikhokelo kwiileyibrari yakho yesigcawu okanye ilebhu yepakethi ngokucophelela, kwaye ucele ugqirha okanye umkhemisi wakho ukuba achaze nayiphi na into ongaziqondiyo. Thatha i-orlistat ngokukodwa njengoko iyalathwayo. Musa ukuthatha ngaphezulu okanye ngaphantsi okanye uthathe ixesha elide kunokuba umiselwe ugqirha wakho okanye uchazwe kwiphakheji.
11.Ngaphambi kokuba usebenzise i-orlistat powder powder powder
Hlola ulwazi.Ukuba unomntu obonisa uphawu olulandelayo, awuvunyelwe ukuthatha:
Unomzimba wokuguqula i-orlistat powder eluhlaza okanye nayiphina imithi.
Uthabatha imishanguzo ekhusela isistim somzimba njenge-cyclosporine (i-Neoral, iSandimmune).
Uye waba nokufakelwa komzimba okanye unayo i-cholestasis (imeko apho ukuqhuma kwe-bile kwisibindi kuvinjelwe) okanye i-malabsorption syndrome (iingxaki ezithatha ukutya)
Unalo okanye unake ubenenkinga yokutya efana ne-anorexia nervosa okanye i-bulimia, isifo sikashukela, amatye eentso, i-pancreatitis (ukuvuvukala okanye ukuvuvukala kwe-pancreas), okanye i-gallbladder okanye isifo se-thyroid.
Ukhulelwe, cwangcisa ukukhulelwa, okanye ukondla. Musa ukuthatha i-powdate powder eluhlaza xa ukhulelwe okanye ukondla.
I-effect-side orlistat powder eluhlaza. i-orlistat powder
12.Wathi uthatha ipowder
Hlukanisa inani lamanqatha, i-carbohydrates, kunye neprotheni
Ngelixa uthayithisa ukulahleka kwesisindo okanye uluhlu oluluhlaza, kufuneka ugweme ukutya okunamafutha amaninzi ngaphezu kwe-30%.
Xa usitya inyama, inkukhu (inkukhu) okanye intlanzi, yidla kuphela i-2 okanye i-3 ounces (i-55 okanye i-85 grams) ukwenzela ukukhangela, ukucutshulwa kwenyama kulungile. kunye neengqolowa ezininzi, iziqhamo kunye nemifuno. Yenza iimveliso zobisi ngokupheleleyo kunye ne-nonfat okanye i-1% yobisi kunye nezinto ezincinci zobisi.
Thatha i-multivitamin yemihla ngemihla equkethe iivithamini A, D, E, K, kunye ne-beta-carotene
I-Orlistat powder ebomvu ibimbela umzimba wakho wokutyunjwa kwamavithamini athile kunye ne-beta carotene. Ngoko ke, xa usebenzisa i-orlistat kufuneka uthathe i-multivitamin yansuku zonke equkethe iivithamini A, D, E, K, kunye ne-beta-carotene. Funda ilebula ukuze ufumane imveliso ye-multivitamin equkethe iivithamini. Thatha i-multivitamin kanye ngosuku, iiyure ze-2 ngaphambi kweeyure ze-2 emva kokuthatha i-orlistat, okanye uthathe i-multivitamin ngexesha lokulala.
13. Emva kokusebenzisa i-orlistat powder
Gcina le nyilisi kwisitya, ivalwe ngokuqinile, Kuphi ukufikelela kubantwana.
Yigcine kwiqondo lokushisa lokushisa kwaye kude nobushushu obuninzi, umswakama (kungekhona kwindawo yokuhlambela), kunye nokukhanya.
Indlela efanelekileyo yokulahla amayeza akho ngeprojekti yokubuyisela imithi endaweni yokucoca le mayeza kwindlu yangasese.
14.Yintonis I-effect-side ye powlistat powder?
Yonke imali isineenxa zombini, nangona i-orlistat powder iyasebenza kakuhle, ingaba nefuthe elithile, iziphumo eziqhelekileyo zomphumo we-orlistat powder ziquka:
igesi ehamba kakuhle
ukungakwazi ukubamba intshukumo
ukuphawula ngamatye e-underclothes
15.Orlistat powder eluhlaza VS Sibutramine
I-Sibutramine isebenza ngokunciphisa ukutya, kuquka ukuxhatshaliswa kwesondlo ngokwenza inkqubo yesifo kunye nengqondo ukwenza isisu sikholelwe ukuba sipheleleyo, siphucula ukuzondla.
I-Xenical ngokusebenzisa indlela ye-fat-blocking mode yezenzo ezisebenzayo ezingekho ngendlela efanelekileyo kwindlela yokuxhamla esiswini, engadingi ukungena kwigazi okanye ubuchopho. Ithintela ukuxutywa kwamanqatha okutya ngokuvimbela ii-enzyme eziphambili ezifunekayo ekuguquleni i-fatty fat to formable form.
Ukunciphisa ukulahlekelwa ngempumelelo
I-Orlistat powder eluhlaza ingaba yincinci ngaphantsi kwe-sibutramine ekunciphiseni ubunzima bomzimba. Nangona i-orlistat powder eluhlaza kunye ne-sibutramine ngokungangabazeki ivelisa ukulahlekelwa kwesisindo, umphumo uyathobekile. Ayikho i-orlistat powder eluhlaza, okanye i-sibutramine inako ukunyusa ukunciphisa ubunzima besininzi kubantu abaninzi.
Ezinye iinkonzo zempilo
I-Orlistat powder eluhlaza ingaba namandla ngakumbi ekuphuculeni i-blood glucose control.
I-Orlistat i powder eluhlaza ikhuthaza ukunciphisa okukhulu kwamazinga e-cholesterol epheleleyo6.
I-Orlistat unyango olumhlaza ludibene nokunciphisa okunyanzekileyo kwingcinezelo yegazi
I-Sibutramine inokunyusa uxinzelelo lwegazi kunye nenani lentliziyo4 Kwizigulane ezigqithisileyo ezinegazi legazi, sibutramine ibonakala ukwandisa uxinzelelo lwegazi kuphela xa izigulane zinganciphisi i-caloric intake.
Amachiza amabini ahluke iiprofayili zokunyamezela. I-Sibutramine ixhomekeke kangcono kunokuba i-orlistat powder eluhlaza. Kodwa ke, i-sibutramine inqatshelwe kubantu abane-coronary disease, ukukhubazeka kwentliziyo, i-arrhythmias, isifo, okanye i-hypertension okanye i-drug-psychiatric.
Iziphumo eziqhelekileyo eziqhelekileyo kunye ne-orlistat powder eluhlaza yilezi zikhuni ezinamafutha, i-flatus kunye nokuphuthunyiswa kwe-fecal. Kwaye kunye nemiphumo ye-sibutramine yintloko, umlomo owomileyo kunye ne-anorexia. I-Sibutramine inokunyusa uxinzelelo lwegazi kunye nentliziyo.
Indawo ye-16.FA & Q
IQ1: Ngaba ndifuna ukunciphisa umzimba?
I-A1: Ukuba uziva ulambile lonke ixesha nangona udla kakhulu, ukuba uziva uqiniswe xa uzigqoka, ukuba uziva unxinzekile kwaye uhamba, ukuba uhlala uziziva uhlaziyekile malunga nomfanekiso wakho, ...... mhlawumbi kufuneka ucinge malunga nokulahlekelwa ngamafutha.
Ubutyebi bubuhlungu ngenxa yokuba ubunzima obunzima bubeka ubuninzi entliziyweni yakho. Unokuphakamisa uxinzelelo lwegazi kunye ne-cholesterol kwaye unokukhokelela kwisifo sikashukela. Ukulahlekelwa isisindo ngenye yezindlela ezilungileyo zokunciphisa umngcipheko weengxaki zentliziyo nezinye izifo.
I-Q2: Ndinganciphisa njani umzimba?
I-A2: Ngokuqhelekileyo i-3 iindlela eziqhelekileyo zokulahlekelwa yi-fat, isicwangciso sokutya, isicwangciso sokusetyenziswa, iimveliso zokulahlekelwa kweoli.
Isicwangciso sokutya, ngokuqhelekileyo kudla isidlo sasekuseni esiphezulu; Gwema iziphuzo zelanga kunye nesiphumo sesithelo; Ukukhetha ukutya okunesisindo (khangela uludwe); Ukusebenzisa amacwecwe amancinci;
Ukucwangcisa umzimba, ngokuqhelekileyo ukuhamba emva kokutya;
Kwiindlela ezimbini zokuqala, ndibetha abantu abaninzi ngaphambili, kodwa ngokungaqhelekanga ngempumelelo, ukuba unomntu oqhubekayo, unokuzama oko, kodwa kubantu abaninzi, ukuthatha iimveliso zokulahlekelwa kwintlawulo kubonakala kuyindlela engcono. : I
Ukunciphisa kakhulu ukutya kwakho.
Ukwenze ulahlekelwe isantya ngokukhawuleza, ngaphandle kokulamba.
Ukuphucula impilo yakho yemethamo ngexesha elifanayo.
IQ3: Ziziphi iintlobo zexabiso lokulahlekelwa kweoli ekufuneka ndizithabathe?
I-A3: Kwimarike, kukho imveliso elahlekileyo yokulahlekelwa kwamanqatha, abanye banokukwazi ukulahleka isisindo ngokukhawuleza kodwa banemiphumo emibi kakhulu, abanye banemiphumo emincinci, nje balahlekelwa ngamanzi emzimbeni wakho kwaye baya kuhlaziya .Khona kukho ezinye ezivela kwimithombo yendalo, akukho miphumo emibi, okanye i-Orlistat powder eluhlaza nje yile mveliso yemveliso, abanye abantu bathatha iPowlistat powder eluhlaza kunye ne-Orlistat powder, eninzi imithombo yemvelo.
Q4: Ngaba i-Orlistat powder elula ukuyisebenzisa?
I-A4: I-Orlistat i powder eluhlaza i-powder ihluke kwezinye iifom, i-purity ephezulu kwaye ilula ukuyisebenzisa, ukuba ngaba ngabavelisi bemveliso yokulahlekelwa kweoli, ungongeza i-Orlistat powder kwikofi, i-candy nezinye izinto, ukuba ngaba ngumsebenzisi , sinokukuthatha nje. Abantu abaninzi bathenga i-Orlistat powder kwi-intanethi uze uyifake kwikhofi okanye uyenze ngokulandelelana emva kokutya.
IQ5: Ndingayithenga phi i-Orlistat powder ephezulu?
I-A5: Kunzima ukuthenga i-Olistat powder kwisitolo, Unokuthenga umthombo we-powder Olistat kwi-intanethi. Ubungcwele buyi-Olistat i-powder iya kuba nefuthe elincinci, nokuba yingozi, ngoko uthenge u-Olistat ophezulu, 99% Olistat, khetha umthengi onokwethenjelwa kufuneka. sele ukhona, unokuthenga, uthathe kalula.Uma ungazi, oku kulandelayo ndiyinconyayo, unokuzama ukuthenga ubungqina obunzulu be-Orlistat kwi-AASraw nkampani.
17.Isihlandlo se-Orlistat powder eluhlaza kunye ne-Olistat powder
I-Orlistat ixabiso lepowder eluhlaza, njengendlela esithethileyo ngaphambili, kwiimarike, kukho iindlela ezahlukeneyo ze-orlistat, ifomathi yefomati, ifomu ye-capsule, ifomu yefowder, ifomu yepilisi, ixabiso lexabiso, eliqhelekileyo lisetyenziswe i-120mg, intengo yemarike ye-120mg capsule I-380 Rupee / 120mg, leyo yi58USD / 1g, intengo yemarike yamathebhulethi, ngokuqhelekileyo iiveki ze-12 (iipilisi ze-252) = £ 149.99 = 201.68USD
Kodwa ngenxa yempuphu, i-99% ye-powder powder, umzekelo, kwi-99% yobungqina be-steroidssupplier SZOB 40USD / 10g, i-10g, engenza amawaka eethebhulethi, iipilisi, yintoni inyaniso emangalisayo!
18.Bulela i-Olistat powder online
Xa ucinga okanye sele usugqibile ukuthenga i-Olistat powder online, kufuneka ucinge ngombuzo omncinane nje: unjani uhlobo lobumsulwa obufunayo malunga ne-Olistat powder, ukuba abantu basebenzise okanye basebenzise izilwanyana, ngokweemeko eziqhelekileyo zokusetyenziswa kweziluntu Unokuba yi-99% yobungcwele, kungenokuba yindleko encinci kodwa kulungele ukusetyenziswa. Kwaye kufuneka ucinge ngexabiso elingawwamkelayo. Kwimarike, intengo ye-99% yobungcwele Olistat powder ijikeleze i-1000USD / 1kg, kodwa nje ngokubhekisa , kubangele sonke siyazi ukuba ixabiso lixhomekeke kubungakanani kunye nomgangatho. Ngaphandle koko, xa ukhetha umthengisi we-Olistat powder ukuze usebenzisane, udinga ukucinga ngezinto ezithile ezifana nani, yeyiphi indlela ehamba ngayo, yintoni uhlobo lokuthumela ukuba ukhethe, nokuba ngaba unomgaqo wokubuyisela, ngaba baya kwenza ntoni xa iimpahla zakho zithathwa ngamasiko, zinokusombulula ezinye iingxaki? Ingaba inkonzo yabo ilungile?
Emva kokuqwalasela zonke ezi zinto, khetha okufanelekileyo ukusebenzisana.
19.Indlela yokuthenga ucoceko ophezulu Olistat powder kwi-AAS
I-AASraw ye-Biochemical Technology Co. yahlelwa kwakhona yi-Shanghai yase-Shanghai yaseBlookystem Engineering Laboratory kwi-2008, eyakhiwa yi-5 yaseTshayina Ph. Oogqirha, abaphakamileyo kwi-Khemishini yobunjineli kwiYunivesithi yaseTulsa, e-Oklahoma, eU.SA. Imveliso ephezulu: i-anabolic steroid , ukwakha umzimba, ukuqina, ukulahlekelwa ngamafutha, amahomoni esondo, ii-SARMS, iziyobisi ze-PCT, i-HGH, homebrew, ugl.Uma unquma ukuthenga i-Olistat powder evela kwi-AAS, izinto omele ukwenze yile:
2.Thumela i-imeyli okanye uthumele imiyalezo kwi-whatsapp kubantu abasebenza kwi-AAS, njenge-Demi, bathetha ngokucacileyo, malunga nokuhlanzeka, ubungakanani, Ukuthumela, idilesi, ukhethe intlawulo efanelekileyo, iimpahla zingathunyelwa ngaphandle kweeyure ze-12 emva kokuhlawula , emva kwe-payemnt, uya kufumana inamba yokulandelela, kwakhona umthengi wethu uya kukugcina ngexesha elifanelekileyo, ngoko kufuneka uhlale phantsi ngokukhawuleza, ulinde iplasela yakho.
I-3.AAS yinkampani e-china, Ukuze ukhuseleko, ukuba unomhlobo waseTshayina, unako ukuvumela abahlobo bakho batyelele inkampani yethu, bathethe ngeenkcukacha, kwaye bafumane iimpahla oyifunayo.
Thenga i-Testosterone Inanthate powder in Bulk Thenga i-Methenolone Inanthate powder: musa ukuyithenga ngaphambi kokuba wazi ezi !!!